Myanmar Gaming Channel
Views 608 857
မြန်မာနိုင်ငံ Streamer များ Mobile Legends Myanmar Top Player များရဲ့ ဗီဒီယိုများကို နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါသည်
LOD ရဲ့ Champion ဆုကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ Ai Esports - AI Vs FCON - Grand Final - Game6-YAT Ent
AI Vs FCON - Grand Final - BO7 - Game6- YAT Entertainment - Mobile Legends
Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021
LOD Grand Final
Best OF7- Game 6
Ai Esports Vs Falcon Esports
မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်
#MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOfDawn # ProInvitational2021 #MobileEsports #MyanmarEsports #Highlights #MobileLegendsBangBang
Maniac နဲ့အတူ ရှယ်ကြမ်းပြသွားခဲ့တဲ့ ACEရဲ့ Roger - AI Vs FCON - Grand Final - BO7 - Game5- YAT Ent
AI Vs FCON - Grand Final - BO7 - Game5- YAT Entertainment - Mobile Legends Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021 LOD Grand Final Best OF7- Game5Ai Esports Vs Falcon Esports မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOfDawn # ProInvitational2021 #MobileEs...
မေ့ထားလို့မရတဲ့ တစ်ချိန်က Kid ရဲ့ Top Global Natalia - AI Vs FCON - Grand Final - Game4- YAT Ent
AI Vs FCON - Grand Final - BO7 - Game4- YAT Entertainment - Mobile Legends Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021 LOD Grand Final Best OF7- Game4Ai Esports Vs Falcon Esports မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOfDawn # ProInvitational2021 #MobileEs...
တားဆီးဖို့ မလွယ်ကူခဲ့တဲ့ FCON ရဲ့ တွဲလုံး - AI Vs FCON - Grand Final - BO7 - Game3- YAT Ent
AI Vs FCON - Grand Final - BO7 - Game3- YAT Entertainment - Mobile Legends Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021 LOD Grand Final Best OF7- Game3Ai Esports Vs Falcon Esports မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOfDawn # ProInvitational2021 #MobileEs...
M2မှာ ကြမ်းပြခဲ့တဲ့ Diggieကို မေ့ထားလို့ အမှားကြီးမှားသွားခဲ့တဲ့ FCON - AI Vs FCON - Game2-YAT Ent
AI Vs FCON - Grand Final - BO7 - Game2- YAT Entertainment - Mobile Legends Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021 LOD Grand Final Best OF7- Game2Ai Esports Vs Falcon Esports မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOfDawn # ProInvitational2021 #MobileEs...
မြန်မာ အကောင်းဆုံးနှစ်သင်းရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှု AI Vs FCON - Grand Final - BO7 - Game 1 - YAT Ent - MLBB
AI Vs FCON - Grand Final - BO7 - Game 1 - YAT Entertainment - Mobile Legends Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021 LOD Grand Final Best OF7- Game 1 Ai Esports Vs Falcon Esports မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOfDawn # ProInvitational2021 #MobileEs...
RM အသင်းကို 3-0 နဲ့ အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တဲ့ - FCON Vs RM - Game3- YAT Entertainment - Mobile Legends
RM အသင်းကို 3-0 နဲ့ အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တဲ့ - FCON Vs RM - Game3- YAT Entertainment - Mobile Legends Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021 LOD Lower Final Best OF5- Game3Falcon Esports Vs RM Esports မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOfDawn # ProInv...
Hyper Ken လဲမှတ်မိပါတယ်ဆိုတဲ့ - FCON Vs RM - Game2- YAT Entertainment - Mobile Legends
Hyper Ken လဲမှတ်မိပါတယ်ဆိုတဲ့ - FCON Vs RM - Game2- YAT Entertainment - Mobile Legends Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021 LOD Lower Final Best OF5- Game2Falcon Esports Vs RM Esports မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOfDawn # ProInvitational20...
Hyper Ken မှတ်မိဦးမှာပါဆိုတဲ့ KidX - FCON Vs RM - Game 1 - YAT Entertainment - Mobile Legends
Hyper Ken မှတ်မိဦးမှာပါဆိုတဲ့ KidX - FCON Vs RM - Game 1 - YAT Entertainment - Mobile Legends Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021 LOD Lower Final Best OF5- Game 1 Falcon Esports Vs RM Esports မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOfDawn # ProInvitatio...
RM Zey ကို စောင့်ကြည့်ပါလို့ ကြိုပြောထားခဲ့တဲ့ KidX - BGJ Vs RM - Game3- YAT Entertainment - MLBB
RM Zey ကို စောင့်ကြည့်ပါလို့ ကြိုပြောထားခဲ့တဲ့ KidX - BGJ Vs RM - Game3- YAT Entertainment - MLBB " Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021 LOD Playoffs Day2Best OF3- Game3Burmese Ghouls Junior Vs RM Esports မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOfD...
အမှားမရှိအောင် ကစားပြသွားခဲ့တဲ့ RM Esports - BGJ Vs RM - Game2- YAT Entertainment - Mobile Legends
အမှားမရှိအောင် ကစားပြသွားခဲ့တဲ့ RM Esports - BGJ Vs RM - Game2- YAT Entertainment - Mobile Legends " Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021 LOD Playoffs Day2Best OF3- Game2Burmese Ghouls Junior Vs RM Esports မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOf...
RM လိုအသင်းကြီးကို အနိုင်ယူပြလိုက်တဲ့ BGJ - BGJ Vs RM - Game 1 - YAT Entertainment - Mobile Legends
RM လိုအသင်းကြီးကို အနိုင်ယူပြလိုက်တဲ့ BGJ - BGJ Vs RM - Game 1 - YAT Entertainment - Mobile Legends " Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021 LOD Playoffs Day2Best OF3- Game 1 Burmese Ghouls Junior Vs RM Esports မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOfD...
RM အသင်းကို ဘယ်လိုမှ ယှဉ်လို့မရဘဲ အိမ်ပြန်လိုက်ရတဲ့ GE - RM Vs GE Game2-YAT Entertainment - MLBB
RM အသင်းကို ဘယ်လိုမှ ယှဉ်လို့မရဘဲ အိမ်ပြန်လိုက်ရတဲ့ GE - RM Vs GE Game2-YAT Entertainment - MLBB " Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021 LOD Playoffs Day2Best OF3- Game2RM Esports Vs Genesis Esports မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOfDawn # P...
အသင်းကြီးနှစ်သင်းရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှု ဘယ်အသင်းအိမ်ပြန်ရမှာလဲ RM Vs GE Game 1 -YAT Entertainment - MLBB
အသင်းကြီးနှစ်သင်းရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှု ဘယ်အသင်းအိမ်ပြန်ရမှာလဲ RM Vs GE Game 1 -YAT Entertainment - MLBB " Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021 LOD Playoffs Day2Best OF3- Game 1 RM Esports Vs Genesis Esports မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOfDawn # ...
Ai Kid သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း တကယ်လုပ်ပြသွားတဲ့ပွဲ - FCON Vs AI - Game3- YAT Entertainment - MLBB
Ai Kid သူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း တကယ်လုပ်ပြသွားတဲ့ပွဲ - FCON Vs AI - Game3- YAT Entertainment - MLBB " Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021 LOD Playoffs Day2Best OF3- Game3Falcon Esports Vs Ai Esports မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOfDawn # ProI...
အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ပွဲ Falcon Esports Vs Ai Esports - Game2- YAT Entertainment - MLBB
Ai အသင်း Dee ကို Hyper ပေးပြီး FCON အသင်းကို အနိုင်ယူပြလိုက်တဲ့ပွဲ - FCON Vs AI - Game 1 - YAT Ent
AG အသင်းကို အကောင်းဆုံး Pick တစ်ခုနဲ့ အိမ်ပြန်ပို့ပေးလိုက်တဲ့ BGJ - BGJ Vs AG - Game2- YAT Ent
၄ ကောင်ကြားထဲ ဒဲ့တွေပါလိုက်ကြုံးနေပြီဖြစ်တဲ့ Stitch - BGJ Vs AG - Game 1 - YAT Entertainment - MLBB
YF ရဲ့ Phoveus Pick နဲ့ပြန်လုပ်ပြသွားတဲ့ - FCON Vs AG - Game2- YAT Entertainment - Mobile Legends
Naomi ရဲ့ Khufra တကယ်လုပ်ပြသွားတဲ့ပွဲ - FCON Vs AG - Game 1 - YAT Entertainment - Mobile Legends
အကုန်လိုက်မေးနေပြီဖြစ်တဲ့ Stitch ရဲ့ YSS - Game2- YAT Entertainment - Mobile Legends
ရှယ်ကြုံးနေဘီဖြစ်တဲ့ Stitch - BGJ Vs SF69 - Game 1 - YAT Entertainment - Mobile Legends
Bun Bunn ရဲ့ Gusion Hyper Pick နဲ့ Ai အသင်းကို အနိုင်ယူပြမှာလား - AI Vs GE Game3- YAT Ent - MLBB
Ai အသင်းကို တကယ်ရိုက်ပြနေတဲ့ Bun Bunn ရဲ့ Ling နဲ့အတူ AI Vs GE - Game2-YAT Entertainment - MLBB
တကယ်ကြမ်းတဲ့ အသင်းကြီးနှစ်သင်းရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှု - AI Vs GE Game 1 - YAT Entertainment - MLBB
RM Zey ကို Natan Pick ပေးလိုက်တဲ့ DW - DW Vs RM Game2- YAT Entertainment - Mobile Legends
Hero Pick မှာတင်အားသာသွားတဲ့ RM အသင်းကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မှာလဲ - DW Vs RM Game 1 - YAT Entertainment
Who Will Win ? "Light Of Dawn" Playoffs Stage Trailer Video - YAT Entertainment
တကယ်လုပ်ပြနေတဲ့ KidX ရဲ့ Alice - SF Vs RM - Game2- YAT Entertainment - Mobile Legends
Ace နဲ့တွေ့ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Zeyy - AI Vs RM - Game 1 - YAT Entertainment - Mobile Legends Myanmar
ကျနော် ACE ပါဆိုပြီး မိတ်ဆက်ပေးသွားတဲ့ပွဲ - AI Vs RM - Game2- YAT Entertainment - Mobile Legends
အရမ်းကြုံးချင် ရိုက်ချင်နေဘီဆိုတဲ့ နှစ်သင်း GE Vs BGJ - Game 1 - YAT Entertainment - Mobile Legends
Naomi ကို Khufra နဲ့ ပြန်လုပ်ပြသွားတဲ့ DK - FCON Vs GE - Game 1 - YAT Entertainment - Mobile Legends
LOD ပြိုင်ပွဲမှာ ACE ရဲ့ Ling ကို ပထမဦးဆုံးမြင်တွေ့ရမဲ့ပွဲ - SF Vs AI - Game 1 - YAT Ent - MLBB
Recallပြတဲ့ FCON အသင်းကို ပြန်လုပ်ပြလိုက်တဲ့ Stitch ရဲ့ Roger - BGJ Vs FCON - Game2- YAT Ent -MLBB
ပြိုင်ပွဲဘယ်လောက်အထိ ပြင်းထန်နိုင်မလဲ ? "Light Of Dawn" Group State Trailer - YAT Entertainment
ACE ကို Hayabusa Pick ပေးလိုက်တဲ့ပွဲ - SF Vs AI - Game2- YAT Entertainment - Mobile Legends
Savage ရရှိသွားခဲ့တဲ့ BGJ Stitch TE Vs BGJ - Game2- BO3 - YAT Entertainment - Mobile Legends
ရှယ်လုပ်ပြနေတဲ့ Simple ရဲ့ Mathilda TE Vs BGJ - Game 1 - BO3 - YAT Entertainment - Mobile Legends
ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပြင်းထန်နေဘီဖြစ်တဲ့ GE Vs BGJ - Game2- YAT Entertainment - Mobile Legends
တကယ်ကြည့်ရတာ အရမ်းမိုက်တဲ့ အသင်းကြီးနှစ်သင်း FCON Vs GE - Game2- YAT Entertainment -Mobile Legends
ACE ရဲ့ Maniac နဲ့အတူ - AI Vs AG - Game 1 - YAT Entertainment - Mobile Legends
Stitch ကို Ling Hyper ပေးလိုက်တဲ့ပွဲ BGJ Vs DW - Game2- YAT Entertainment - Mobile Legends Myanmar
Kenn ကို Lancelot Pick ပေးလိုက်တဲ့ DW - FCON Vs DW - Game2- YAT Entertainment - Mobile Legends
Bane Hyper နဲ့ တကယ်လိုက်ကြုံးနေဘီဖြစ်တဲ့ Stitch - BGJ Vs DW - Game 1 - YAT Entertainment - MLBB
Ai Esports အသင်းကို အနိုင်ယူပြသွားတဲ့ AG - AI Vs AG - Game2- YAT Entertainment - Mobile Legends
Bane Hyper နဲ့ တကယ်အလုပ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ OL Vs DW - Game 1 - BO3 - YAT Entertainment - Mobile Legends
တကယ်ကြမ်းပြသွားတဲ့ Joker Kg Lay ရဲ့ Hayabusa - UNC Vs SF - Game 1 - BO3 - YAT Entertainment - MLBB
တခြားပွဲတွေနဲ့ လုံးဝမတူတဲ့ Pick တွေနဲ့ ELC Vs AG - Game 1 - BO3 - YAT Entertainment - Mobile Legends
I am Leo ရဲ့ Brody တကယ်ကြမ်းပြသွားတဲ့ OL Vs DW - Game2- BO3 - YAT Entertainment - Mobile Legends
Damage တွေအပြည့်အဝပေးနေတဲ့ Silent ရဲ့ Clint - BGJ Vs FCON - Game 1 - YAT Entertainment - MLBB
Phoveus Last Pick နဲ့ SF အသင်း UNC အသင်းကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာလား UNC Vs SF - Game3- BO3 - YAT Ent
Karina Hyperနဲ့ တကယ်အနိုင်ယူနိုင်မှာလား ELC Vs AG - Game2- BO3 - YAT Entertainment Mobile Legends
AI Vs FCON - Grand Final - BO7 - Game6- YAT Entertainment - Mobile Legends Light of Dawn " Mobile Legends Pro Invitational 2021 LOD Grand Final Best OF7- Game6Ai Esports Vs Falcon Esports မြန်မာ Game သတင်းတွေနဲ့ Video တွေကို အမြဲတမ်းကြည့်လို့ရနိုင်အောင် MGC ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော် #MLBB #MobileLegends #MLBBEsports #YATEntertainment #LightOfDawn # ProInvitational2021 #MobileEs...
Shwe Bo Nyein Shwe Bo Nyein 14 days ago
Ace ko yss ေပးတာငရဲၾကတာဘဲ🙂👍
Aung Phyoe Min Month ago
you know kid natalia
All in Here Gaming Month ago
Pls visit my TheXvid channel <3
Thu Ya Month ago
BG old school combo အကွက်လေးပဲဟာကို😂😂
channthaa koye Month ago
K Khaing Month ago
Min Mahar Naing Month ago
ai win !!!
zaw min Month ago
sorry pl fc fan tway
Hein Htet Aung Month ago
RED DRAGON Month ago
AGT Gaming Month ago
Hawkins baxter Josephine Month ago
OMG, EXACTLY WHAT I NEEDED --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i got it from 💜 *bestcards.online* 💜 *"**0:46**"* ghW
Erickson Genevieve Month ago
OMG, EXACTLY WHAT I NEEDED --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i got it from 💜 *bestcards.online* 💜 *"**3:50**"* wWc
Millie Fletcher walton Month ago
OMG, EXACTLY WHAT I NEEDED --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i got it from 💜 *bestcards.online* 💜 *"**2:43**"* WaZ
Parker griffin Alexis wilkins Month ago
OMG, EXACTLY WHAT I NEEDED --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i got it from 💜 *bestcards.online* 💜 *"**3:23**"* NHA
Elena evans Cunningham flora Month ago
OMG, EXACTLY WHAT I NEEDED --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i got it from 💜 *bestcards.online* 💜 *"**4:38**"* QAD
kaung htet music Month ago
Myanmar Gaming Channel Month ago
West aryanna Duncan Month ago
OMG, EXACTLY WHAT I NEEDED --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i got it from 💜 *bestcards.online* 💜 *"**0:04**"* ZTV
Thein lwin 3537 pa lo Month ago
AI မလာသေးဘူးလား bro fb မသုံးတော့ ဒီက စောင့်ကြည့်နေရတာ
thet ko Month ago
ကိုလေတိုက်ထားတာ ကျွန်တော်အခုတော့ပြန်ပြေးျနရပြီ ကျွန်တော်အခုတော့ special. နေပြီ
myanmar no1 tank. အား blue buff ရိုက်သတ်မှာဖြစ်ပွား
MoLa Ki Month ago
Myanmar gaming channal လဲဆိုသေးတယ်ကွာ AI ကိုယ်စားပြုတင်တာတောင် နိုင်တဲ့ပွဲပဲတင်ပြီး ရှုံးတဲ့ပွဲကျတော့ မတင်တာက ကိုယ်တွေကြည့်ရှူ့အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကို တမင်စော်ကားသလို ပမာမခန့်လုပ်သလိုဖြစ်ရာကျတယ်ကွာ အဲတော့ကာ ရှုံးလဲတင်နိုင်လဲတင် မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ်တို့ကလဲ ကြိုက်မှကြည့်မယ်ပဲ ဖြစ်သွားမယ်....ရှုံးပွဲတင်ရင်ကြည့်သူမရမှာဆိုးလို့လား ....အားပေးတဲ့ fan ဆိုတာက အဲလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသင့်တယ် အိုကေတယ်နော် ဒါပဲပြောချင်တယ်ဂေါင်းကြီးရေ 👍👍👍👍👍
ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုတစ်ယောက်ချင်းစီကို reply ​စိတ်ရှည်ရှည်ပြန်ပေးတဲ့အတွက် Bro ရဲ့စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး follower တွေကိုအလေးထားတဲ့အတွက် လေးစားချီးကျူးမိပါတယ် 👏👏👏 နောင်လဲ ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေဗျာ 🤝🤝🤝
Ai ပွဲတင်မက တခြားပွဲတွေပါ ကျနော်တို့ ချနယ်မှာ Game ပွဲ အကုန်တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ Ai နိုင်တဲ့ပွဲပဲ တင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ Bro Video List ထဲ သေချာလေးကြည့်ကြည့်ပါဗျာ MGC ကို အားပေးတဲ့ တစ်ယောက်ချင်းကို အလေးထားပါတယ်ဗျာ 😍
မြန်မာနှစ်သင်းလဲဖြစ်တယ် ဆော့တာလဲ သုံးပွဲဆော့တာကွာ ဘာလို့ AI နိုင်တဲ့ game1 နဲ့ game3ပဲတင်ရတာလဲ AI ရှုံးသွားတဲ့ game2လဲတင်သင့်တယ်လို့ မထင်ဘူးလား...ကိုယ်တွေလဲ (အရင်BG) AI fan တစ်ယောက်ပါပဲ ဒါပေမဲ့ တစ်ဘက်အသင်းကလဲ မြန်မာပါပဲကွာ သူလဲ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုဆော့ခဲ့ဖူးတဲ့အသင်းပါ မျှမျှတတ တင်ပေးစေချင်တယ်ကွာ... အဲလိုပြောချင်တာထက် AIရှုံးရှုံးနိုင်နိုင် AI ပွဲမှန်သမျှတင်ပေးစေချင်တယ်.. ဥပမာ ကို ice ice (ရေခဲ) ကြီးလိုပေါ့
Okay ပါ Bro ....အရင်မလေ့လာပဲရမ်းပြောသလိုဖြစ်မိသွားတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် 🙏🙏🙏 နောင်လဲဆက်လက်အားပေးနေပါအုန်းမယ်👍👏
Game 1,2,3 အကုန်တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ Ai ပွဲမှမဟုတ်ပါဘူး တခြားပွဲတွေလဲ အကုန်တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ thexvid.com/video/R1Awjj37uHI/video.html
NAY ZAW Month ago
ပြောချင်တာက M2 first runner up ဗျာ simply run တာဗျာ..သူလိုကိုယ်လို ဗျာ..ထွေထွေထူးထူး မရှိဖူး local ဗျာ Falcon ကို တချက်ရိူး ခန်းမ ထဲမှာ ဘာလားပေါ့
What is Ai meaning tell me bro